Q4OS 2.6 dị na Desktọpụ Atọ n'Ime Otu 14.0.5 na KDE Plasma 5.8.6 | Site na Linux
Q4OS 2.6 dị ugbu a na Trinity Desktop 14.0.5 na KDE Plasma 5.8.6
Izu gara aga onye mmepe na-ahụ maka Linux nkesa Q4OS kpughere site na nkwupụta gọọmentị na blog ya nnweta ụdị ọhụrụ nke nkesa Linux gị, na-abịa bụ ya ọhụrụ mbipute Igwe okwu Q4OS 2.6.
Na nhapu ohuru ohuru a gụnyere ụfọdụ mmelite nke sistemụ na ọkachasị usoro mmelite nke ngwa ndị mejupụtara Linux a nkesa.
Como isi ihe nke ọhụụ ọhụrụ a Anyị nwere ike ịchọta gburugburu desktọọpụ nke mejupụtara distro a na ụdị ya kachasị ọhụrụ, otu nke anyị hụrụ Atọ n'Ime Otu na ụdị ya 14.0.5 na KDE Plasma 5.8.6 desktọọpụ gburugburu.
Nke a bụ nkesa e mere iji nye usoro njirimara njirimara njirimara (Atọ n'Ime Otu) na ngwa ndị dị mfe, yana iji jee ozi API maka ngwa ngwa nke atọ dịka Google Chrome, VirtualBox na ngwaọrụ ndị nrụpụta.
La ọhụrụ version 2.6 dabere na ọhụrụ anụ nsụgharị nke oru ngo Debian 9.5 gbatị.
A na-enyochazi Q4OS-fixes na patches. Mmelite niile dị maka ndị ọrụ Q4OS dị ugbu a na ebe nchekwa Q4OS oge niile.
Q4OS na-enye akụrụngwa ya na ọrụ ya naanị, karịsịa 'Desktọpụ profaịlụ' ngwa profaịlụ kọmputa gị dị iche iche ọkachamara ọrụ ngwaọrụ.
1 Ihe ohuru banyere Q2OS 2.6 Scorpion
2 Budata Q4OS 2.6
Ihe ohuru banyere Q2OS 2.6 Scorpion
Ihe ngosi 2.6 ohuru, ekwuputara, na-eweta ihu ọhụụ na desktọọpụ mgbe ị jiri akara mmanya gbara ọchịchịrị. Ọ dị ka Arc GTK + anya wee mee Q4OS OS mma karịa ọkọlọtọ
Ejiri 'Setup' ihe bara uru maka ntinye a na-enweghị nsogbu nke ngwa ndị ọzọ, 'Welcome Screen' na ọtụtụ ụzọ mkpirisi wuru iji mee ka nhazi usoro dị mfe.
Maka ndị ọrụ novice, LXQT, XFCE, Cinnamon na LXDE nhọrọ nrụnye gburugburu ebe obibi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Sistemụ arụmọrụ ugbu a bụ sistemụ arụmọrụ ngwa ngwa ma dị ike dabere na Debian 9.5 ma na-enye ezigbo ọrụ na-arụ ọrụ, nchekwa, ntụkwasị obi, nkwụsi ike ogologo oge.
Mgbakwunye na-agbakwunye nke Linux gosipụtara atụmatụ ya yana gburugburu desktọọpụ na-abụghị nke abụọ a kpọtụrụ aha n'elu bụ: LXQT, XFCE, Cinnamon na LXDE.
A na-akwanyere usoro a ugwu site na ngwa ngwa ya na ihe ngwaike di ala. Ọ na-arụ ọrụ zuru oke na igwe ọhụụ yana kọmputa ochie.
Usoro Ọ dịkwa oke uru maka gburugburu igwe ojii n'ihi ihe ngwaike dị ala.
Ọhụrụ LTS nke Q4OS Scorpion ga-enwe nkwado maka afọ 5, nke a dabere na Debian 9 Stretch na mgbakwunye na nkwado nke Atọ n'Ime Otu 14.0.5 na KDE Plasma 5.8 LTS desktọọpụ gburugburu.
Ntughari ohuru a Ọ dị maka kọmputa 64bit / x64 na 32bit / i686pae kọmputa, yana sistemụ i386 na-enweghị ndọtị PAE.
A na-enyekwa ARM 64bit / arm64 na 32bit ụdị / armhf nke anyị kwurula banyere ebe a na blọọgụ izu ole na ole gara aga nke ụdị nke 2.5 gbakwunyere nkwado iji nwee ike ịwụnye ya na Pipe Pi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere nkọwa ndị a, ị nwere ike ịkpọtụrụ akwụkwọ a njikọ na-esonụ.
Na ihuenyo nnabata, ị ga-ahụ nhọrọ iji wụnye "Multimedia Codecs" na ndị ọkwọ ụgbọala. Enweghị nsogbu, dị nnọọ pịa bọtịnụ ahụ ga-egosi. Ole na ole clicks na "Next", ị ga-ahụ nhọrọ "Wụnye" iji wụnye gị codecs na ọkwọ ụgbọala.
Ọ bara uru ikwu na sistemụ arụmọrụ nwekwara Windows Installer nke na - enye gị ohere iwunye Q4OS site na gburugburu Microsoft.
Budata Q4OS 2.6
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ụdị ọhụụ a maka nkesa Linux a, ha kwesịrị ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ọrụ ahụ ebe ha nwere ike ịnweta njikọ nbudata nke nkesa na ụdị ya dị iche iche, ma ọ bụ maka kọmputa desktọọpụ ma ọ bụ kọmputa nwere ndị na-arụ ọrụ ARM.
Enwere ike idekọ ihe oyiyi ọ bụla site na enyemaka nke Etcher, ma ọ bụ na USB ma ọ bụ microSD maka ojiji na Raspberry pi.
Nwere ike nweta ihe oyiyi na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Q4OS 2.6 dị ugbu a na Trinity Desktop 14.0.5 na KDE Plasma 5.8.6
M arụnyere ya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka m, agbanwere m desktọọpụ na Nwunye nke kachasị amasị m, nsogbu m nwere bụ na mgbe m nọ na nwunye, ana m enweta ozi nke arụ ọrụ na-enweghị ikike mgbe m na-anwa ịrị elu draịva diski ma ọ bụ SD kaadị, ma ọ bụrụ na ị hapụ m mgbe m na-eji ndabara TDE desktọọpụ, m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ iji dozie nsogbu a.
Elive 3.0 bụ ezigbo distro maka kọmputa ochie ma ọ bụ nke dị ala